Ciidamada Imaaradka Oo Ka Hulleelay Maamulka Puntland,Maxaa Xigidoona?. |
Ciidamada Imaaradka Oo Ka Hulleelay Maamulka Puntland,Maxaa Xigidoona?.
Hargeisa(GNN):-Ciidamada Imaaraadka Carabta ee dhanka tababarka ka taageerayay ciidamada badda ee maamulka Puntland ayaa maanta ka dhoofay garoonka diyaaradaha Boosaaso iyaga oo raacay diyaarad khaas u ah oo Imaaraadka looga soo diray. Arrintan ayaa loo arka in ay tahay Imaaraadka oo joojiyay tababaridda iyo maalgalinta ciidamada badda Puntland.
La Soco Wixii Warar Ah Ee kasoo Cusboonaada.